Mee Orginic Fatịlaịza n'ụlọ
site ha na 2021-06-18
Etu esi ewepu ahihia? A na-edozi fatịlaịza nke ahịhịa dị mkpa na nke a na-apụghị izere ezere mgbe ezinụlọ na-eme fatịlaịza n'ụlọ gị. Composting n'efu bụkwa ụzọ dị mma na nke akụ na ụba na njikwa mkpofu anụ ụlọ. Enwere uzo di iche iche nke uzo abuo di na ulo oru fatịlaịza ụlọ ...
Bido oru mmeputa fatịlaịza gị
ONYE Ọ B NowR Now na ugbu a, ịmalite usoro mmepụta fatịlaịza n'okpuru nduzi nke atụmatụ azụmaahịa ziri ezi nwere ike imeziwanye ndị ọrụ ugbo fatịlaịza na-adịghị emerụ ahụ, ma achọpụtala na uru nke iji fatịlaịza na-edozi ahụ karịrị ọnụ ahịa nke nhazi osisi fatịlaịza. ọbụghị ...
Nri Atụrụ maka Organic Fatịlaịza Ime Technology
Enwere otutu ugbo aturu na Australia, New Zealand, America, England, France, Canada na otutu obodo. N'ezie, ọ na-amịpụta ọtụtụ nri atụrụ. Ha bụ ezigbo akụrụngwa maka imepụta fatịlaịza organic. N'ihi gịnị? Ogo nke atụrụ nri bụ nke mbụ na-azụ anụ ụlọ. ...
Kedu ihe kpatara eji etinye ọkụkọ ka ọ ga-emebi kpamkpam tupu i jiri ya?
Nke mbụ, nri ọkụkọ a rawụ adịghị ka fatịlaịza organic. Fatịlaịza Organic na-ezo aka na ahịhịa, achicha, nri anụ ụlọ, ero fọdụrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ site na ire ere, gbaa ụka na nhazi na-eme fatịlaịza. Nchịkọta anụmanụ bụ naanị otu n'ime ihe ọkụkụ ...
Ntinye na ndozi Chain Plate Compost Turner
Chain efere compost Turner gbapụrụ ọsọ ahụ decomposition usoro nke organic n'efu. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma nwee nnukwu arụmọrụ, ya mere, a na-eji akụrụngwa akụrụngwa a eme ihe n'ọtụtụ ebe ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ na-emepụta fatịlaịza, kamakwa na ịkọ ugbo. Nnyocha tupu ị na-eduzi ule nyocha ...
Kedụ ka ị ga - esi họrọ ahịhịa nke mepụtara ụlọ ọrụ
Nnyocha nke akụrụngwa fatịlaịza maka nnukwu fatịlaịza fatịlaịza na-etinye aka na ogologo oge, akụrụngwa akụrụngwa dị n'ime ala na-ebelata na-enweghị ntinye nke fatịlaịza organic. Ebumnuche bụ isi nke fatịlaịza fatịlaịza bụ ịmịpụta fatịlaịza organic ...
Otu esi ejikwa mma nke compost
Nchịkwa ọnọdụ nke mmepụta fatịlaịza organic, na omume, bụ mmekọrịta nke anụ ahụ na ihe ndị dị ndụ na usoro nke compost kpokọtara. N'otu aka, ọnọdụ nchịkwa bụ mmekọrịta na ịhazi. N'aka nke ozo, ikuku di iche iche agwakọtara onwe ha, n'ihi onu mmiri ...
Kedu otu esi ahọrọ igwe ntụgharị compost?
N'oge a na-azụ ahịa nke na-emepụta fatịlaịza azụmaahịa, enwere ngwa ọrụ dị oke mkpa nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ahịhịa na-ekpo ọkụ gbaa ụka-igwe na-ekpo ọkụ, anyị ga-ewebata ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi banyere compost Turner, gụnyere ọrụ ya, ụdị na otu esi ahọpụta a. ..
Biogas Waste ka Fatịlaịza Production Ngwọta
Ọ bụ ezie na ịzụ ọkụkọ na-arịwanye elu na ewu ewu n'Africa kemgbe afọ ole na ole, ọ bụ obere ọrụ. Otú ọ dị, n'ime afọ ole na ole gara aga, ọ ghọwo nnukwu ọrụ, na ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-eto eto na-elekwasị anya na uru mara mma a na-enye. Okuko ndi mmadu nke ove ...
Kedu otu esi ewepụta fatịlaịza sitere na nri nri?
Ihe mkpofu nri na-arịwanye elu ka ọnụ ọgụgụ ụwa toro na obodo na-eto eto. A na-atụba ọtụtụ nde tọn nri na mkpofu gburugburu ụwa kwa afọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% nke mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ọka, anụ na nri a na-ekpokọta na-atụfu kwa afọ ....
Jiri mkpofu anụ ụlọ mepụta fatịlaịza na-akpata ndu
Ezi ọgwụgwọ na iji anụ ụlọ arụ ọrụ nke ọma nwere ike weta nnukwu ego maka ọtụtụ ndị ọrụ ugbo, kamakwa iji bulie ụlọ ọrụ nke aka ha. Nchịkọta nri fatịlaịza bụ ụdị fatịlaịza na ọrụ nke fatịlaịza microbial na organic f ...
Myọcha Press Mud na Molasses Compost Fatịlaịza Ime Usoro
Sucrose bụ 65-70% nke mmepụta shuga ụwa. Usoro mmepụta ihe chọrọ nnukwu uzuoku na ọkụ eletrik, ọ na-ewepụtakwa ọtụtụ ihe nrụpụta n'oge ọkwa dị iche iche n'otu oge ahụ. Ọnọdụ Production Sucrose na ụwa Enwere mba karịrị otu narị ...